गोठाला जीवन : कुकुरको सुरक्षाकै भरमा घना जङ्गलमा गोठको बास! - Nepal Page Nepal Page
कार्तिक ३०, २०७७ आईतबार
गोठाला जीवन : कुकुरको सुरक्षाकै भरमा घना जङ्गलमा गोठको बास!
बेनी, ३० कात्तिक । वरिपरि जङ्गलले घेरिएको बीचमा गोठ छ । गोठको छेवैमा भेडाबाख्राको हुल छ । जङ्गलको छेउको चौरमा रहेको भेडीगोठको हेरालुको जिम्मा पाँच वटा कुकुरलाई दिइएको छ । यो म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–५ मल्कबाङको पुतलीडाँडा नजिकको भेडीगोठको दृश्य हो । बस्तीदेखि एक दिनको यात्रापछि पुगिने यहाँको भेडीगोठको सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गोठमा रहेका पाँच वटा भोटे जातका कुकुरको रहेको भेडापालक कृषक हिमबहादुर छन्त्यालले बताए ।
करिब ४०० भेडाबाख्रा रहेको छन्त्यालको गोठमा दुई जना हेरालु छन् तर उनीहरुको जिम्मेवारी भेडाबाख्रालाई चरण क्षेत्रमा लगाउने र गोठको सामान ओसार पोसार गर्ने मात्रै हो । गोठमा रहेका भेडाबाख्रालाई जङ्गली जनावरबाट बचाउने र गोठका हेरालुहरुको समेत सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी गोठमा रहेका कुकुरहरुकै रहेको भेडापालक कृषक छन्त्याल बताए ।
गोठमा रु १५ देखि ६० हजारसम्ममा छन्त्यालले कुकुर खरिद गरी गोठमा पालेको छ । चरणक्षेत्रदेखि रातमा सिङ्गो गोठको सुरक्षाका लागि कुकुर नै पहिलो रक्षकको रूपमा रहेको छन्त्याललको अनुभव छ । गत वर्ष रोगका कारण गोठमा कुकुर मरेपछि आफ्नो गोठमा १५ दिनको अवधिमा बाघ र चितुवाले १५ वटा र स्यालले ५ वटा भेडाबाख्रा मारेको छन्त्यालले जानकारी दिए । “कुकुर भएको समयमा अहिलेसम्म गोठमै बाघ र चितुवा आउन सकेका छैनन्, कहिलेकाहीँ कुकुरको आँखा छलेर चरणक्षेत्रमा भने आक्रमण हुने गरेको छ, भेडीगोठको रक्षक भनेकै कुकुर हो”, उेनले भने ।
भेडीगोठमा रहेका भेडाबाख्रासँगै कुकुरहरु समेत चरणक्षेत्रमा जाने गर्छन् । बेँसीदेखि हिमालको फेदीसम्म घना जङ्गलका बीचमा गोठ राख्दै आएका मल्कबाङका अर्का भेडापालक कृषक कमरा विकले कुकुरहरु आफ्नो सुरक्षाको सिपाही र गोठको सारथी भएको बताए । जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट बचाउन कुकुरको घाँटीमा काँडेमाला लगाइदिने चलन रहेको छ । दिनको समयमा चरण क्षेत्रमा जाने कुकुरहरु रातको समयमा भेडाबाख्रा बसेको चौरको वरपर बसेर भेडाबाख्रा र गोठको पहरेदारको काम गर्ने विकको भनाइ छ । “यहाँ मेरो साथी भनेकै कुकुर हो, रात होस् या दिन, मेरो र गोठमा रहेका भेडाबाख्रालाई जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट बचाउने जिम्मा उसैको हो”, विकले भने ।
घरपालुवा गुनिलो जनावरको रूपमा चिनिने कुकुर केही वर्ष अघिसम्म ग्रामीण भेगका घरघरमा पालिन्थे । समाज विकाससँगै गाउँघरमा समेत कुकुर पालन हराउँदै जान थाले पनि अनकन्टार जङ्गल र हिमालको फेदीमै पुगेर गरिने भेडाबाख्रा पालनका लागि भने कुकुर अत्यन्तै महत्वपूर्ण र उपयोगी रहेको छ ।
यसकारण हुन्छ, मधुमेहका बिरामीमा कोरोनाको बढी जोखिम
काठमाडौं, २९ कात्तिक । २१ औं शताब्दीकै सर्बाधिक डरलाग्दो रोगको रुपमा संसारभर आतंक मच्चाइरहेको कोरोना
जाडोमा स्वस्थ रहन के खाने ? यस्ता छन् जान्नैपर्ने कुराहरु
काठमाडौं २५ कात्तिक । जाडो मौसममा रुघाखोकी तथा चिसोको समस्या हुन्छ । यस्तो बेलामा सन्तुलित
ऐश्वर्य रायको सौन्दर्य, यस्तो छ उनको जीवनशैली
कामठाडौं – बलिउडका चर्चित नायिका ऐश्वर्य राय वच्चन उमेरले ४७ बर्ष पुगिन् । उनी एक
कोरोनाबाट कसरी बच्ने भनेर चिन्तीत हुनहुन्छ ? कोरोनालाई जित्न सकिने यि ५ कुराहरु !
काठमाडौं, २३ कात्तिक । यदि तपाईंमा कोरोना भाईरस पोजिटिभ देखिएको छ वा कोरोना संक्रमित हुनुहुन्छ
आफ्नै सन्तानप्रति पनि कोही निर्दयी बन्न पुग्छन् ?
सन् १६५८ मै फ्रान्सेली दार्शनिक ब्लेज पास्कलले एउटा निष्कर्ष निकालेका थिए, मान्छे भनेका यो संसारकै
आँटिला पर्वतारोही आङरिता: जसले नेपाल छाडेर कहीं जान मानेन !
काठमाडौं – आँटिला पर्वतारोही आङरिता शेर्पाको ७२ वर्षको उमेरमा राजधानीमा सोमबार निधन भयो । उनले
समय यकिन नभएकाका मृत्युको श्राद्ध कुन तिथिमा गर्ने ?
काठमाडौं, १८ भदौ । बुधबारदेखि सोह्र श्राद्ध सुरु भएको छ । १५ दिनसम्म चल्ने सोह्र
विवाह सम्बन्धः तर, यस्तो शव्दको प्रयोग कहिल्यै नगर्नुस्
हरेक सम्वन्ध विश्वासमा अडिएको हुन्छ । झैन पतिपत्नीको केही यस्ता कुरा पनि हुन्छन् जसले सम्बन्ध